Madaxweynaha Galmudug oo ku wajahan Cadaado iyo xil cusub uu u magacaabay gobolka Galgaduud (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweynaha Galmudug oo ku wajahan Cadaado iyo xil cusub uu u magacaabay gobolka Galgaduud (AKHRISO)
Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa wareegto uu maalintii shalay soo saaray xilka guddoomiyaha cusub ee gobolka Galgaduud u magacaabay Maxamed Cali Cilmi, isagoona xilka ka qaaday Xuseen Cali Wehliye Cirfo oo horay guddoomiye uga ahaa gobolkaas.
C/kariin Guuleed ayaa wareegtada uusoo saaray ku sheegay, in kadib markii uu la tashi la sameeyay ku-xigeenkiisa uu go’aan ku gaaray inuu xilka guddoomiyaha gobolka Galgaduud u magacaabo Maxamed Cali Cilmi.
Magacaabistaan ayaa kusoo beegmaysa xilli xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ay maalintii shalay codka kalsoonida ah kala laabteen madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, islamarkaana ay xilkii ka qaadeen.
Sidoo kale, madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa la filayaa in saacadaha soo socdo uu gaaro magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, waxaana magaaladaasi maanta laga dareemayaa diyaar-garowga soo dhaweyntiisa.
Dhinaca kale, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa sheegay in maanta oo Arbaco ah la magacaabi doonno guddi doorasho oo soo diyaariya doorashada madaxweynaha cusub uu yeelan lahaa maamulka Galmudug.
Illaa iyo haatan lama oga sida uu xaalka ku dambeyn doonno, iyadoona siyaasadda kacsan ee Galmudug ay kusoo beegmayso xilli deegaanada halkaasi uu ka jiro abaaro baahsan oo ay saameeyn ku yaalato dadka iyo duunyadda ku dhaqan halkaas.